Playboy မဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူ အသက်၈၄နှစ်ဘိုးဘိုး အသက်၂၄နှစ် မော်ဒယ်နဲ့ စေ့စပ်လိုက်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Playboy မဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူ အသက်၈၄နှစ်ဘိုးဘိုး အသက်၂၄နှစ် မော်ဒယ်နဲ့ စေ့စပ်လိုက်ခြင်း
Playboy မဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူ အသက်၈၄နှစ်ဘိုးဘိုး အသက်၂၄နှစ် မော်ဒယ်နဲ့ စေ့စပ်လိုက်ခြင်း
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 27, 2010 in News, World News | 13 comments
ကိုကိုကာလသားတို့လက်စွဲ ပလေးဘွိုင်းမဂ္ဂဇင်း တည်ထောင်သူ ဟဂ်ဟဖ်နာသည် အသက် ၂၄နှစ်အရွယ်ရည်းစား ပလေးဘွိုင်းမော်ဒယ် ခရစ်စတယ်ဟယ်ရစ်နဲ့ စေ့စပ်လိုက်သည်။ ဟဖ်နာက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပထမဆုံး တွီတာကနေတဆင့် အသိပေးသည်။ ခရစ်စတယ်ကို လက်စွပ် ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူမ ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျတယ်။ ငါ့မှတ်ညဏ်ထဲမှာ ယခုနှစ် ခရစ်စမတ် အားလပ်ရက် သတ္တပတ်က အပျော်ဆုံးပဲ..ခရစ်စမတ် လက်ဆောင်အဖြစ် မျှော်လင့်နေတာကို ရပြီ ..အဲဒါ ခရစ်စတယ်ရဲ့ အချစ်ပါ။
သူ့သတင်းကို လုံဝရှင်းလင်းသွားအောင် ပိုင်ရှင်သူဌေးကြီးက ‘ဟုတ်တယ် ခရစ်စတယ်ကို ပေးလိုက်တာ စေ့စပ်လက်စွပ်။ ဒီသတင်းကနေ ထူးထူးဆန်းဆန်း အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ဖို့ငါ မရည်ရွယ်ဘူး။ အားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေ’။
ယခု လက်ထပ်ပွဲသည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ လူပျိုကြီး ဟဖ်နာအတွက် တတိယအကြိမ် လက်ထပ်ခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူသည် မိုင်းလ်ရဒ်ဆိုသူနဲ့ ၁၉၄၉မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၉ခုနှစ်တွင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့သည်။ (အဲဒီအိမ်ထောင်မှ ၅၈နှစ်နဲ့ ၅၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သားသမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်)။ ၁၉၈၉မှာ တနှစ်တာ ပလေးဘွိုင်းမဂ္ဂဇင်းမော်ဒယ် ကင်ဘာလီ ကွန်ရဒ်နဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် လက်ထပ်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး အသက် ၁၀နှစ်နဲ့ ၉နှစ်ရှိ သားနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ သူတို့စုံတွဲရဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲတာကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကဲ… ဦးဖက်တို့ ဦးပေါက်တို့ ဦးမိုးညိုတို့ သဂျီးတို့ ဇွဲမလျော့ကြပါနဲ့၊ အချိန်တွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ ဆရာကိုအောင်ပုကတော့ တရားသမားမိုလို့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူးလေ။
ဩော်… အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ..
To make his news absolutely clear, the mogul then added: “Yes, the ring I gave Crystal is an engagement ring. I didn’t mean to makeamystery out of it. A very merry Christmas to all.”
It will be the third marriage for famous bachelor Hefner. He wed first wife Mildred in 1949 (they have grown children Christie, 58, and David, 55) before divorcing in 1959. In 1989, he walked down the aisle with Playmate of the Year Kimberley Conrad, and they went on to have sons Marston, 10, and Cooper, 9. The duo’s divorce was finalized last year.
“ဦးဖက်တို့ ဦးပေါက်တို့ ဦးမိုးညိုတို့ သဂျီးတို့ ဇွဲမလျော့ကြပါနဲ့။”
ကြားတယ်နော် ဦးဖက်၊ ဦးပေါက်၊ဦးမိုးညို နဲ့ သဂျီး
ဒီအရွယ်ပဲရောက်နေပြီ ……အဘိုးကြီးက လွန်းလွန်ပါတယ် ။ ကောင်မလေးက လည်း လွန်ပါတယ်။ အသက်ကိုပဲကြည်ပါအုံး ။
အချစ်ကတော့ အမြဲတမ်း နုပျိုနေဆဲ ပေါ့လေ…
နွားအို မြက်နုကြိုက်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုး ။
ပလေးဘွိုင်းက မော်ဒယ် ကောင်မလေးကလည်းသွားမပါရင်သာနေပါစေ xxx ပါရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အစားထဲကဆိုတော့… ( xxx = ကားကိုပြောပါသည်:D )
ကိုယ့်အိမ်က ကိုယ့်အဘိုးနဲ.တောင် လမ်းထွက်မလျှောက်ရဲတော့တဲ့ ခေတ်ပါလားနော် ….
ဟောလိဝုဒ်က..သမီးလေးတွေ..မမတွေများ ..သူတို့အရွေးမခံရလို့ … တီဗီထဲ … အတင်းတွေချနေကြတာ..။
၂၄ နှစ်က ၈၄နှစ်မီလီယံနာဖိုးဖိုးကို အပီဆွဲစေ့သွားတယ်ဆိုပဲ..။
ဒီဖိုးဖိုးက ..နာမယ်ကြီးပေါ်ပြူလာဖြစ်တာရော..ငွေရော တပြိုင်ထဲရှိနေတဲ့ဖိုးဖိုးမို့ ပါ..။
လွန်ရောကျွံရော … နောက် ၁၀နှစ်ပေါ့..။
ယူဖြစ်သွားရင် … အဲဒီကလေးမ .. မီလီယံနာတန်းဖြစ်ပြီကိုး..။
အဲဒီတော့မှ .. ၃၄နှစ် မမ, သူကြိုက်တဲ့ ဘဲဘဲ ခေါင်းခေါက်ရွေးတော့ မပေါ့။
ဆြာခိုင်ရော စီနီယံမစီထားဘူးလား။ ဟီးဟီး။ နောက်တာနော်။
အင်း … သူ.ရွာနဲ. သူ.အထာကတော့ ဟုတ်နေတာပဲ …
အားကျလိုက်တာ ဟီးးးးဟီးးးးးးးး အဖျားတောင်တက်ချင်လာပြီ
ညန်နာ ကျီမှာ ယူဖစ်ရ တိုးမရပ်လိုက်တာနော်
အင်း လူပျိုကြီးများ စဉ်းစားကာ နေရပေအုံးမည်..။ အားမငယ် ကျပါနဲ့နော်..။ သွားမပါလဲ ရပါတယ်တဲ့။
ဒီဘိုးဘိုးကြီးနဲ့ အောင်ပုနဲ့ ကတော့ စိတ်ထားခြင်းလုံးဝတူတယ်ဟေ့